"Amathiphu amathikithi", noma ukhethe umama ngonina
Kuyaziwa yibo bonke ukuthi amadodakazi kaningi avame ukufana kakhulu nonina, futhi lokhu kufana nokuphathelene nezici ezihlukene. Yiqiniso, kukhona okungafani, kodwa ngisho nasezimo ezinjalo, ngisho nokuncane kakhulu, kodwa ezinye izici ezivamile zikhona. Ngakho-ke, ukuze ukwazi kangcono okhethiweyo wakho, kanye nokunquma ukuthi kwenzeke yini kulezi zinto noma ezinye izinto nezinto eziyinkimbinkimbi, kukwanele nje ukucubungula umamazala osasa. Yile ndlela ezovumela ukugwema amaphutha, noma ngaphezulu ukuze uqiniseke ngokufaneleka komuntu okhethiwe ukuba abe ngumlingani wokuphila.
Isikhathi sokwazi umamazala wakho uzokutshela ngobuhlobo phakathi kwentombazane nonina.
Isikhathi lapho intombazane ikhetha ukutshela wakhe okhethiwe kumama wayo, angatshela ngokuningi. Ngaphezu kwalokho, uma kuhlaziywa kahle, kuyokwenzeka ukubuka iminyaka embalwa ngaphambili futhi uthole ukuthi isimo siyini emndenini. Lapha konke kuxhomeke ekude kwesikhathi ngemuva kokuqala kobudlelwane intombazana enquma ngesinyathelo esibalulekile kuye.
Uma kwenzeka ukuthi omaziyo kwenzeka kusheshe, cishe inyanga noma ngaphezulu, ungaqiniseka ukuthi ubuhlobo phakathi kwendodakazi nomama buqinile kakhulu. Bayihlobo lwezintombi, phakathi kwazo ezingekho izimfihlo. Lokhu kungabonakala kunenzuzo, kodwa empeleni kudingeke uqaphele lesi simo. Iqiniso liwukuthi empilweni elandelayo intombazane izohlale iqinisile kumama wayo, ngenxa yalokho kuyoba nethonya elikhulu kulokho okwenzeka emndenini. Noma yisiphi iseluleko sakhe sizocatshangelwa, futhi, njengoba kwaziwa, lokhu kuvame ukuholela ekungqubuzaneni phakathi kwabashadile futhi, ekugcineni, isehlukaniso.
Uma ubuhlobo buhlala isikhathi eside, futhi isikhathi sokuthandana asifi, ngakho-ke, akufanele kube nokuthokoza kakhulu. Yiqiniso, isimo esinjalo singase sibonise ukuthi le ntombazane izimele, kodwa enye indlela ingenzeka. Isibonelo, angase asabe ukusabela komama, okukhulumela nokuthembela kwakhe ngokuphelele "kumngane omdala." Ngakho le ndlela ayikho kangcono, uma engekho embi kakhulu. Ngakho-ke, kungcono ukuzama ukuthola "igolide elisho", hhayi kuphela ngosuku lokuhlangana nomamazala omusha, kodwa futhi ngokuphathelene nobuhlobo bakhe nendodakazi yakhe.
Ubuhlobo phakathi kokubukeka komamazala wakhe nokubukeka komkakhe esikhathini esizayo.
Kukholelwa ukuthi idatha yangaphandle yabomama isuke izuzwe ifa ngamadodakazi abo, futhi lokho okungafani kuyinto engavamile kakhulu. Wachaza konke okushiwo izakhi zofuzo, ngokusho ukuthi ukubonakala kwendodakazi kubonakala kanjani kufana nomama wakhe ngesikhathi esifanayo. Okungukuthi, uma umamazala oneminyaka engamashumi amane ehlushwa ngokweqile, khona-ke indodakazi izobhekana nenkinga efanayo. Kodwa kunenye ye-nuance: lokhu kungenzeka kuphela uma zifana kakhulu. Uma kungenjalo, lo mthetho awusebenzi.
Yiqiniso, lokhu kufanele kukhunjulwe, kodwa lesi simo asihlali ngaso sonke isikhathi. Umuntu akakwazi ukungazinaki iqiniso lokuthi indodakazi ingaba nezakhi zofuzo zikababa, ezinobukhulu, isibonelo, ezizithoba kakhulu. Kulokhu, naye uzoba mnandi futhi omncane. Futhi akusikho konke. Ngisho noma uninazala egcwele, kanti le ntombazane ifana naye, lo mkhuba uyakwazi ukugwema i-vagi eyedlulele. Ukwenza lokhu, udinga ukudlala ezemidlalo, wenze ukuzivocavoca futhi ubuke isibalo sakho. Ngakho-ke qaphela ukubukeka komamazala, kodwa hhayi ikakhulukazi ukukhathazeka ngalokhu.
Ukuziphatha komamazala nomuntu ocansini.
Ngokuvamile kwenzeka ukuthi ngaphambi komshado kanye nokuzalwa kwengane, ukuphila kobulili kwabalingani bakhombisa umsebenzi wabo kanye nesifiso sabo, kodwa emva kwalokho isimo sishintsha kakhulu. Abanye bathatha lesi simo sezwe kalula, kanti abanye bacabanga ngesehlukaniso. Yingakho kubalulekile ukuthi uzame ukunquma kusengaphambili ukuthi ngabe intombazane izobe isebenza ngokuya ocansini emva kokuzalwa kwengane, noma ngesikhathi sokukhulelwa kwengane kuba yisikhathi sokugcina isigaba esiseduze siphila.
Ukuze uthole impendulo yalo mbuzo, akufanele nje uzame ukwazi intombi yakho ezindabeni zothando, kodwa nonina. Kulula kakhulu ukwenza lokhu. Isibonelo, uma umamazala ethandana ukudlala ngothando nomyeni wakhe, noma nje ukumphatha ngothando nangesisa, khona-ke intombazane, cishe, ngeke ibe yimbi kakhulu.
Esinye isibonakaliso esihle - uma uninazala angase ahlabelele ngezihloko ezithandana naye, futhi uyaziqonda kule ndawo. Kusukela kulowo muntu angaqonda ukuthi ulungile ezindabeni zothando, futhi ngenxa yalokho, nendodakazi yakhe naye. Uma ngabe "umama" esekhulile ebonakala kulolu hlelo, khona-ke kukhona amathuba amakhulu ukuthi indodakazi yakhe ngeke ipholile ngemuva kwamashumi eminyaka embalwa.
Ngokusekelwe kuzo zonke ezingenhla, ungasho ngokuphepha ukuthi uninazala angakwazi kangcono ukwazi umthandi wakho. Yiqiniso, zonke izindlela ezibalwe zinephutha elithile, ngoba icala ngalinye lihlukile, kodwa njalo lisebenza njalo. Ngakho-ke, uma ubheka ngokucophelela "umama" wesikhathi esizayo, khona-ke ikusasa lomfazi, kanye nokuphila komshado olandelayo, kuzocaca futhi kuvuleke.
Ukuhamba noma ukuhlala: ingabe ikusasa lobuhlobo bakho?
Izimfihlo zokubamba: ukuqala kobulili obuhle
Ukuqala ubuhlobo obusha
Ababukeli bathanda ukuphela okujabulisayo
Izipikili ezingenamandla futhi ezinzima, kanjani ukubhekana nalokhu?
I-Horoscope ye-Love for 2015 nge-Capricorn
Okudingayo kufanele uphumelele
Izinkolelo nemicabango engafanele mayelana netiyi
Indlela yokwenza iholide nge-lipstick ebomvu: imithetho emine eyinhloko!
I-pasta ebhakiwe ene-feta cheese nama-shrimps
Ingabe umuntu unabangane abaningi?